Universal Online TV | प्रदेश राजधानी विवाद : कहाँ कहाँ छ प्रदर्शन ? प्रदेश राजधानी विवाद : कहाँ कहाँ छ प्रदर्शन ?
प्रदेश राजधानी विवाद : कहाँ कहाँ छ प्रदर्शन ?
सरकारले प्रदेशहरूको अस्थायी मुकाम तोकेपछि कतिपय जिल्लामा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सरकारले लामो समयको रस्साकस्सीपछि सातै प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेपछि कतिपय जिल्लामा राजधानी माग्दै प्रदर्शन भएको हो।
बिहीबार बिहानैदेखि प्रदेश नम्बर १ को धनकुटा, प्रदेश २ को वीरगञ्ज, प्रदेश ५ को दाङ र प्रदेश ७ को डोटीमा प्रदर्शन भइरहेको छ। कतिपय ठाउँमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा प्रदर्शन उग्र भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।
सरकारले प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को हेटौंडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को रुपन्देही (बुटवल), प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढीलाई अस्थायी मुकाम तोकेको हो।
प्रदेश नम्बर १ को धनकुटामा प्रदर्शनकारी उग्र भएपछि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा (कर्फ्यु) जारी गरेको छ। सम्वाददाता हरि लम्जेलका अनुसार प्रदर्शनकारीले पूर्वाञ्चल क्षेत्री प्रकाशन कार्यालयमा आगजनी गरेका छन्। उनीहरूले सार्वजनिक बिदाको दिन भएपनि भित्र छिरेर त्यहाँ रहेका फर्निचरमा आगजनी गरेका छन्। कार्यालयका झ्याल ढोकाको सिसा पनि उनीहरूले फुटाएका छन्।
धनकुटा नगरपालिकाको दमकलमा पनि प्रदर्शनकारीले क्षति पुर्‍याएका छन्। मोरङबाट आएको एम्बुलेन्समा प्रदर्शनकारीले तोडफोड गरेका छन्। डिभिजन सहरी विकास कार्यालयभित्र रहेको एउटा सरकारी मोटरसाइकल पनि प्रदर्शनकारीले जलाएका छन्। प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका तर्फबाट विजयी भएका इन्द्रमणि पराजुली र निरन राई दुबैजनाले प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
प्रदर्शनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सँगै छन्। प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन जितेका संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको भने औपचारिक सहभागिता आन्दोलनमा देखिएको छैन। प्रदर्शनमा पेशा व्यवसायीहरू र उद्योग वाणिज्य संघले पनि लिखित रुपमै ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। बिहानैदेखि पर्साका बजार यातायतका साधन पसल आदि बन्द छन्।
प्रदेश नम्बर ५ मा रुपन्देहीलाई अस्थायी मुकाम तोकिएपछि दाङमा आन्दोलन चर्किएको छ। दाङका सबैजसो दल आन्दोलनमा छन्। एमाले जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खड्काको संयोजकत्वमा संघर्ष समिति गठन भएको छ। खड्कासहित माओवादी केन्द्रका सहइन्चार्ज निर्मल आचार्य र कांग्रेस सचिव शंकर डाँगीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भएका प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सर्वपक्षीय भेला बसेरै डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरिएको हो। नेपाली कांग्रेस जल्ला समितिका सबैले राजीनामा दिएका छन् भने बिहीबार बिहानै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पुत्ला दहन गरेका छन्।
प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ प्रदेश मुकाम तोकिएको विषयमा शान्त देखिएका छन्। प्रदेश ३ को मकवानपर, प्रदेश ४ को पोखरा र प्रदेश ६ को सुर्खेतमा सरकारले अस्थायी कार्यसञ्चालन स्थल तोकेको छ।